Caymiska iPad | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Macluumaadka ku-soo-noqoshada dugsiga ee dib-u-cusboonaysiinta caymiska: Caymiska waa in loo cusbooneysiiyaa sannad dugsiyeed kasta waxaana loo heli karaa iibsashada dhammaan ipadyada qayb ka ah barnaamijka iPad-ka 1: 1 ee Degmada. (Barnaamijka caymiska wuxuu khuseeyaa iPad-yada oo laga yaabo inay ardaydu guriga keenaan). Caymisku waa kharash la doorto; looma baahna.
Caadi ahaan, ardayda iibsata caymiska ka dib markay helaan ipadka waa inay haystaan ipadka aragga ay ka baaraan shaqaalaha Media Center si loo hubiyo in qalabku uusan waxyeello u geysan waqtiga iibsiga caymiska. Ka dib kormeer guuleystay, shaqaalaha Xarunta Warbaahinta ayaa qiimeyn doona $ 40 khidmadda laga qaadayo koontada ardayga ee Skyward Fee Management; iyo ujrada ayaa loo heli doonaa bixinta khadka tooska ah. Caymisku wuxuu dabooli doonaa iPad-ka laga bilaabo taariikhda la iibsado ka dib kormeerka illaa inta ka harsan sannad dugsiyeedka iyo xagaaga soo socda. Qiimaha sanadlaha ah ee caymiska iPad-ka waa $ 40 halkii iPad sanadkiiba. Deyrta 2020, u wareejinta isku-darka iyo e-Barashada awgeed, ardayda looma baahan doono in la baaro iPad-kooda ka hor inta aysan dooran inay soo iibsadaan ama cusbooneysiiyaan caymiska iPad-ka. Ikhtiyaarka ah in laga qoro caymiska iPad-ka waxaa laga heli karaa Skyward illaa Sebtember 30, 2020.
Waalidiinta ardayda cusub ee imanaya sanad dugsiyeedka waa inay u sheegaan shaqaalaha Xarunta Warbaahinta haddii ay doonayaan inay iibsadaan caymiska markay is qorayaan. Haddii iPad horay loo soo saaray markaa kormeer muuqaal ah oo iPad-ka ah oo ay ku sameynayaan shaqaalaha Xarunta Warbaahinta ayaa loo baahan doonaa si loo iibsado caymiska.
Caymiska waa in loo cusbooneysiiyaa sanad dugsiyeed kasta iyo xagaaga soo socda. Ogeysiis ogeysiin ah ayaa loo dirayaa qoysaska oo dhan illaa Ogosto 1 sidaa darteed lacag-bixinta dib-u-cusbooneysiinta ayaa la sameyn karaa ka hor bilowga dugsiga. Baadhitaannada looma baahna markay cusboonaysiinta caymiskaaga.
Kharashaadka suuragalka ah ee qoysaska waxyeelada iyo / ama luminta:
Waxyeello ama shaashad jaban oo aan caymis lahayn , $ 115 illaa $ 275 waxay kuxirantahay tusaalaha
Kharashka beddelka kiiska iPad-ka ee la bixiyay, $ 35
Kharashka beddelka xeedho iyo darbi gidaarka iPad-ka ah, $ 20
Kharashka beddelka ipadka oo dhan, $ 325
Barnaamijka caymiska wuxuu bixiyaa caymis dhameystiran marka ugu horeysa ee shil shil ah. Mararka kale ee shilalka waxyeellada ah waxay la kulmi doonaan $ 40 oo laga jari karo. Dhammaan qaybaha iPad-ka waa la daboolay, oo ay ku jiraan baytariga iPad-ka, qaybaha gudaha iyo dibedda, muraayadda, shaashadda LCD, badhannada dibedda, jaakada makarafoonka, iwm.
Waxyeellada ula kac ah lama daboolayo. Dhaawac ula kac ah waa midka ama loo fiirsado in kas ula kac u dhacay ama mid lagu go'aaminayo nooca waxyeelada ula kac ah dabiiciyan.
Waxyeellada Ipad-ga ayaa soo gaadhay iyadoo ka baxsan kiis difaac ah.
Waxyeellada ku timaadda ipadka dareerayaasha awgood lama daboolayo.
Khasaaraha iyo xatooyada qalabka ayaan la daboolin.
Xeedho iPad-ka kumuu daboolmin.
Kiiska iPad-ka lama daboolin.
Fadlan halkan guji si aad uga hesho tilmaamaha lacag bixinta bogga Bursar's Office. Markaad ku jirto Skyward, hubi inaad hoosta ka eegto "Khidmadaha Ikhtiyaariga ah" ee Maamulka Lacagta Skyward si aad u hesho.
Waxaad heli doontaa rasiid dhamaadka macaamilkaaga. Rasiidku waa xaqiijintaada in caymiska caymisku uu jiri doono haddii ama goorta aad u baahato.
Wixii caawimaad ah ee habka lacag bixinta, ama haddii aadan helin rasiid, email ugu dir Xafiiska MHS Bursar: bursar@minnetonkaschools.org
Fur iskuxirka hoose si aad u aragto tilmaamaha ardayda iyo waalidiinta aaladaha tikniyoolajiyadda ee loo adeegsado elektaroonigga ee Minnetonka.
Eeg Tilmaamaha Tech
U soo gudbi su'aalaha iyo jawaab celinta khadka tooska ah waxaadna ku heli doontaa jawaab hal maalin ganacsi gudahood adoo adeegsanaya Family Technology Helpdesk.
1: 1 Barnaamijka iPad /